'Ngizibuza ukuthi yini engalungile engayenza uma ngibona iBhele noKhenyeza besadlala ibhola' | isiZulu
'Ngizibuza ukuthi yini engalungile engayenza uma ngibona iBhele noKhenyeza besadlala ibhola'
UManyisa uchaza ngesizathu sokushiya iBhakabhaka
Amazwi enduduzo ngokudlula kobengumhlaziyi webhola kwa-SABC
Umfana, 12, ugwazwe amanxeba angu-33 edlala ibhola epaki
Johannesburg - Uma uLebohang Mokoena ebuka abadlali abafana noSiyabonga Nomvethe noMabhuti Khenyeza besadlala ibhola esigabeni esiphezulu, akazi ukuthi yena kungani engasekho kuleli zinga.
‘UCheeseboy’31, ukholelwa ukuthi kuningi asangakwenza, kodwa okwamanje ujima yedwa, njengoba esalinde iqembu elingase limsayinise, okungenani ngoJanuwari.
Washiya i-Ajax Cape Town ekupheleni kwesizini edlule ngemuva kokuba izinto zingamhambelanga kahle khona kanti manje ukulambele kabi ukubuyela enkundleni enze into ayithandayo.
OLUNYE UDABA: Ukaputeni uvikela umqeqeshi ngokubhacaza kwekilabhu
“Ngisebenza ngokuzikhandla. Kunabaqeqeshi esengike ngakhuluma nabo. Bayangithembisa, kodwa ngeke ngikwazi ukudalula amakilabhu esengike ngakhuluma nawo,” kusho lo mdlali oseke wadlalela i-Orlando Pirates neMamelodi Sundowns ngesikhathi ekhuluma neKickOff.com.
“Ngisaneminyaka engu-31 nje kuphela, kanti uma ngibuka abadlali abafana ‘noBhele’[Nomvethe] noMabhuti ‘bebulala’ abantu, ngiyazibuza ukuthi yini engayenza ebhedayo.”
Uphinde wathi: “Ngibuka ‘uShabba’[Siphiwe Tshabalala] bese ngifikelwa umcabango wokuthi yini engayenza engalungile. Angikhuluphele futhi anginayo inkinga nencane. Mhlawumbe kuzomele ngihlabe izinkomo ezingu-15. Ngiyakhumbula ukudlala ibhola.”
Ukushoda kwamagoli kuyibuyisela emuva iChiefs - Komphela
Umqeqeshi weKaizer Chiefs uSteve Komphela ukholelwa ukuthi ukuhluleka kwezakhe ukuvalela amagoli kule sizini yiyo imbangela yokuthi badlale ama-draw angu-12, angu-8 kuwona aphela kungafakwanga magoli.
ISafa ihoxise ikhadi elibomvu elanikezwa umdlali ngephutha
ISouth African Football Association isimemezele ukuthi ikhadi elibomvu elinikezwe umdlali wasemuva weGolden Arrows uLimbikani Mzava selihoxisiwe.
IPirates kayivumanga nobemenywe yiBafana Bafana
Ummqeqeshi weBafana Bafana uStuart Baxter usekuqinisekisile ukuthi umsizi kamqeqeshi kwi-Orlando Pirates, uRhulani Mokwena, ngeke abeyingxenye yethimba leBafana Bafana.
Uyakhala umndeni womshayeli wetekisi odutshulwa abagibeli kwaMashu
Ukhethe ukuzibulala umama ngoba izingane zakhe zingawutholi umsebenzi
UMinnie Dlamini uthi akanandaba nabathi usekhuluphele
Uboshiwe odubule wabulala intombi kwaSwayimane
Ugwetshwe udilikajele owadlwengula umfana eNtshangwe
Cpt: 15-24°C Pta: 15-21°C
Jhb: 11-17°C Bloem: 13-16°C
Dbn: 19-20°C PE: 16-22°C
Bedfordview - 11:31:18 AM CRASH before Gilloolys Interchange - all lanes open Ezinye zasemigwaqeni